Home Wararka Wariye gaariga loogu xiray qarax oo uu dhaawac ka soo gaaray
Wariye gaariga loogu xiray qarax oo uu dhaawac ka soo gaaray
Wararka naga soo gaaraya degmada Waabari gaar ahaan Waaxda March ayaa waxa ay sheegayaan in goor dhow halkaasi uu ka dhacay Qarax gaari.
Qaraxa ayaa ahaa Mid lagu xiray gaari Nooca raaxadda ah, waxaana ku dhaawacmay ruuxii watay gaariga.
Goobjoogayaal ayaa Xaqiijiyay in gaariga uu watay wariye Ismaaciil Sheekh Khaliifa oo ka mid ah Wariyeyaasha Soomaaliyeed, islamarkaana uu soo gaaray dhaawac.
Ciidamada Ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay, waxaana halkaasi laga qaaday dhaawaca Wariyaha.
Ismaaciil Sheekh Khaliifa ayaa horay u ahaa Agaasimaha Idaacadda Radio Star fm haddana wuxuu ahaa Agaasimaha Idaacadda Hudda ee Magaalada Muqdisho.
Mid ka mid ah Isbitaalada Muqdisho ayaa loo qaaday dhaawaciisa,sida aan Wararka ku heleyno.
Previous articleGudoomiye Mursal oo kulan deg deg ah isugu yeeray Gudiga Joogtada ee Golaha Shacabka
Next articleRW Kheyre “Roobow awood ciidan baan uga reebeyna doorashada”
Goorta uu Furmayo Kala-fadhiga Golaha shacabka oo la shaaciyay (Aqriso)
Amarka Farmaajo ee joojinta lacagta Imaaraadka ma hirgeli kartaa?